Ogaden News Agency (ONA) – Dagaal Ganacsi oo Mareykanka & Shiinaha U Billowday.
Dagaal Ganacsi oo Mareykanka & Shiinaha U Billowday.
Posted by Wariye Qaran	/ July 7, 2018
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa canshuur 25% ah kusoo rogay in ka badan 800 oo ah badaceedo ay China soo saarto. Canshuurtan ayaa dhaqan gashay jimcihii, markii saacadda ay hal daqiiqo dhaaftay 12-kii aroornimo, xilliga Washington.
Dhaqan-gelinta canshuurta Trump ayaa si rasmi ah u billaabeysa dagaalka ganacsiga ee Mareykanka iyo Shiinaha oo muddo laga digayey inuu dhaawici doono dhaqaalaha dalalka dunida oo idil. Beijing ayaa ka digtay inay si xooggan uga aar gudan doonto canshuurtan la saaray alaabaha ay sameyso, oo gaadheysa 34 bilyan oo dollar.
Afhayeenka wasaaradda ganacsiga China, Gao Feng ayaa weriyeyaasha u sheegay khamiistii in China aysan ridi doonin xabadda koowaad, hase yeeshee aysan u furnaan doonin wax aan ka ahayn inay difaacdo danta China iyo dadkeeda. Gao waxa uu sheegay in China aysan madaxa hoorsan doonin, oo aysan aqbali doonin in loo hanjabo.
Madaxweyne Trump ayaa ku hanjabay in 450 bilyan oo dollar oo canshuur dheeri ah uu saari doono badeecadaha China, haddii Beijing ay ka dhabeyso ballanqaadkeeda ah inay canshuurto alaabta Mareykanka uu sameeyo.